Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan Britaaniyaa 3 hidhe, yakki goolii uumuuf yaaluu - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan Britaaniyaa 3 hidhe, yakki goolii uumuuf yaaluu
Mootummaan Itoophiyaa lammiiwwan Britaaniyaa 3 hidhe, yakki goolii uumuuf yaaluu
Manni murtii Itoophiyaa lammiiwwan Britaaniyaa 3 gochaa shororkeessummaa irratti bobba’anii turan jedhe hidhaa wogaa afurii hanga jahaatiin adabuun isaa beekame. Yakki namoota kanniinii, akka manni murtii jedhutti, ‘mootummaa Islaamaa Itoophiyaa keessatti dhaabuuf yaalii godhaniiru’ kan jedhuudha.
Namoonni hidhaman kunniin Muhaammad Shariifiifi Muhaammad Ahmaddha; jiraattota magaalaa Landan turan. Mannii murtii biyyattii namoonni lamaan kunniin biyyattii keessatti haleellaa geggeessuuf jecha leenjii woraanaa Keeniyaa keessatti fudhachuu isaaniiti kan bira gaye jedhu. Ammas, namoonni lamaan kunniin Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) woliin hiriiruudhaan tankaarfii fudhachuuf karoorfataniiru yakka jedhuun himataman.
Himatamaan sadaffaas, Muhaammad Alii Adroos, manni murtii biyyattii woggaa afuriifi baatii jahaan akka adabamu itti murteesse. Muhaammad Alii Adroos dhalootaan nama Somaalee yoo ta’u, lammii Britaaniyaati. Yakki inni raawwate jedhame ammoo hidhattoota Yamaniitiifi ABO woliin wolqunnamtii qaba kan jedhuudha.
Namoonni kunniin, akka ibsa mootummaatti, Itoophiyaa keessatti kan qabaman yeroo karoora isaanii hujitti geeddaruuf sochii eegalanitti.
Mootummaan Britaaniyaa lammiileen isaa 3 Itoophiyaa keessatti hidhamuu mirkaneesseera, akka gabaasa AFPtti.
Itoophiyaan seera ‘farra gooliuumtotaa’ baay’ee hamaa ta’e qabaachuun isii nibeekama. Qaamonni addaddaa mootummaan biyyattii mirga ummata hinkabaju jechuun qeequ. Bara 2014 Amnesty International mootummaan Itoophiyaa saba Oromoo irratti dhiittaa mirgaa daangaa hinqabne kan raawwatu ta’uu isaa ragaa gadi lakkiseen agarsiiseera.
gabaasa amnesty international
yakka goolii uumuu
Previous articleBulchiinsi Magaalaa Finfinnee lafa heektaara 52,000 seeraan ala kanniin qabataniif woraqaa abbummaa kennuuf
Next articleTaphoonni waancaa kubbaa miilaa Aafrikaa (CAF) 30ffaan har’a Ekuwaatooriyaal Giinii keessatti eegala